Universal Tv Live - Meydadka saddex ruux oo Somali ah oo laga helay xeebaha dalka ...
Meydadka saddex ruux oo Somali ah oo laga helay xeebaha dalka YemenXeebaha dalka Yemen waxaa laga helay meydad hor leh oo dad Soomaali ah,kaddib markii Jicmihii doon ay sarnaayeen lagu weerarray marinka Baab Al-mandab ee badda Cas.
Ilaa saddex qof ayaa meydadkooda la helay,waxaana la la’yahay tiro kale oo dad Soomaali ah kuwaaso doonta la socday,dadka aan wali la helin waxaa ka mid ah hooyo iyo labo carruur ah oo ay dhashay.
Doonta ay dadkan la socdeen waxaa duqeysay diyaarad nooca qumaatiga ku kacda ah,waxaana ay marka ku sii jeedeen dalka Sudan sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhaawacyada laga soo badbaadiyey halka uu shilka ka dhacay.
Isbaheysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa sheegay in aanay iyagu mas’uul ka aheyn weerarka qaxootiga Soomaalida ah lagu laayay.
Dowladda Soomaaliya waxaa ay dhowaan ka dalbatay isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga iyo Yemen inay soo cadeeyaan cida ka dambeysay weerarka lugu dilay ku dhowaan 50-ka ruux ee Soomaalida ah.NextFaysal Cali Waraabe: Dadka ka hadlaya...PreviousCiidamada dowladda oo xalay Muqdisho ...Comments